Indlela yokwandisa inani leekhonkco zangaphandle?
Ama-backlink ahlala zibonakaliso ezinkulu zekhwalithi yomthombo web, ukufaneleka kunye negunya. Bonisa iGoogle ingaba kufuneka ukulubala le website kwi-TOP okanye cha. Izikhonkwane zangaphandle zezinga eliphezulu zichaphazela ngqo indawo yakho kwiziphumo zophando. Nangona kunjalo, akulula ukufumana ijusi yekhonkco kwii-website eziphezulu ze-PR ukuba uninzi olutsha kwimarike yedijithali. Kwiimithombo ezincinane okanye ezisandulweyo ezisandulweyo ezisakhasayo, ukwakha i-backlinks kubonakala kunzima kakhulu, ngelixa zonke izinto ezibizwa ngokuba "iindlela ezilula kunye nangoko" zichasene nezikhokelo zeGoogle kwaye zingabangela i rankings. Ngaphezu koko, ukuba wenza izalathisi ngendlela ekhangelekisayo kwiinjini zokukhangela, usengozini yokufumana izigwebo kwiGoogle.
Namhlanje, siza kuthetha ngendima yenani le-backlink in promotional business promotion and talk about some techniques you can find more.
Kutheni ufuna i-backlinks?
Ngokuqhelekileyo, i-backlink yilapho enye intanethi ye-intanethi iqhagamshelana nebhulogi yakho. Ukuba le website inexabiso elithile kubasebenzisi kwaye ithathwa njengegunya ngeenjini zokukhangela, iinqununu ezifunyenwe kuyo ziya kuzisa kwi-site quality quality traffic. Nangona kunjalo, ukuba ubeka unxibelelwano kwi-spammy, umthombo wewebhu osanda kutshintshwa, ithuba lakho lokufumana i-juice ye-link liphantsi kakhulu. Iziqulatho ezingaphezulu kweyona ndawo zikhomba indawo yakho, igunya lakho elingaphezulu lizakufumana kwiinjine zokukhangela.
Kufuneka uqaphele ngeenjongo ezahlukeneyo zangaphandle kwiikhonkco njengoko uzakufumana iziphumo ezahlukeneyo ukusuka kulunye uhlobo lwe-backlink. Izixhumanisi ziyahluka ngokuxhomekeke kwinyaniso nokuba ngaba unxibelelwano okanye unxibelelwano.
Ngoko ke makhe sibhale ezinye iintlawulo ezibuyiswe kwiiwebhusayithi zethu:
I-backlinks ithumela i-traffic kwindawo yakho
Ukudala umkhankaso wokuqhagamshelanisa umgangatho, ufumana ithrafikhi evela kwezinye imithombo yewebhu njengabasebenzisi abafunda isithuba kunye nekhonkco yakho nqakraza kuyo ukuze uthole ulwazi oluninzi.
I-backlink isebenza njengevoti kwezinye iiblogi kwaye ixelela iinjongo zokukhangela malunga negama elihle kunye negunya yakho domain. Kusebenza ngokugqibeleleyo njengendlela yokuqulunqwa kolwazi ngegama.
Uya kuphawulwa ngabanye abanikazi bewebhusayithi
Xa ufaka isiqhagamshelo kwisayithi yakho ebhekisela kwenye i-domain, umnini weso siza Uya kuphawula le ngcaciso ngokusebenzisa isofthiwe yokuhlalutya (f. e. Semalt Web Analyzer okanye i-Google Analytics). Leli thuba eligqibeleleyo lokuba ufumane enye imithombo ye-intanethi ehambelana ne-web ukuze uqaphele idibansi yakho kwaye ubeke ubudlelwane obuhle bezoshishino nawe.
Indlela yokwandisa inani le-backlink?
Ukufumana i-backlinks ngokusemthethweni, kufuneka ukhiqize umxholo oyingqayizivele kunye nokuzibandakanya. Nangona kunjalo, bonke abanikazi bewebhsayithi abahlakaniphile benza umxholo womgangatho, kwaye unokulahleka phakathi kwamanye amanqaku. Unokuzama ukufikelela kwii-keywords eziphezulu zamagama kunye nomxholo ohluke ngokupheleleyo kwabanye. Ukuba unako ukubonelela ngabaphulaphuli bakho abatyebileyo ngento entsha, ngokokuba abasebenzisi abaninzi banokubelana nabanye kunye nabanye abalukhuni beza kuba nolwazi malunga nomkhwa wakho.
Ukuxhuma kwezinye iiblogizi ithuba elihle lokufumana i-backlink ngokwakho ngenxa yokuba ufikelele kwi-radar ezo bhulogi. Xa udibanisa nabanye abantu, unokufumana ama-share, link, kunye nokukhuthazwa kwe-organic Source .